CompanyHub & Fitsipika ankapobeny
Tamin'ny volana Mey 25, 2018, lalàna vaovao momba ny tsiambaratelo vaovao antsoina hoe General Data Protection Regulation (GDPR) dia hisy fiantraikany amin'ny Union Union (EU). Ny GDP dia manitatra ny zon'ireo olon-tokana ao amin'ny EU ary mametraka andraikitra vaovao amin'ny fikambanana rehetra izay mivezivezy, manara-maso na manara-maso ny angon-drakitra ao amin'ny EU. Ahoana no hampisy fiantraikany amin'ny orinasa misy anao?
Ny GDPR dia lalàna vaovao momba ny fiarovana vaovao (toa ny 25, 2018) ao amin'ny Vondrona Eoropeana izay manamafy ny fiarovana ny angon-drakitra manokana eo anatrehan'ny fandrosoana ara-teknolojika haingana, ny fitomboan'ny fanatontoloana, ary ny drafitra iraisam-pirona manerantany. Izy io dia manavao sy manolo ny rafitra fiarovana ny lalàna momba ny fiarovana ny firenena amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fitsipika tokana, mivantana azo atao ao amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana.
Inona no fitsinjovana ny GDP?
Ny GDPR dia manitsy ny "fanodinana" ny angon-drakitra ho an'ny olona ao amin'ny EU, izay ahitana ny fanangonana, fitehirizana, famindrana na fampiasana. Ny fikambanana rehetra mandrindra ny angon-drakitra manokana ataon'ny olona ao amin'ny EU dia ao anatin'ny fepetran'ny lalàna, na tsy misy na ny fikambanana dia manana fisiana ara-batana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Zava-dehibe, eo ambany GDP, ny fotodrafitr'ireo "angona manokana" dia tena malalaka ary mandrakotra izay zavatra rehetra mifandraika amin'ny olona fantatra na fantatra (antsoina hoe "loha-hevitra").
Moa ve ny GDP mitaky ny angon-dRariny any amin'ny EU mba hijanona ao amin'ny Vondrona Eoropeana?
Tsia, ny GDP dia tsy mitaky ny angon-dRaolombelona manokana mba hijanona ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ary tsy mametraka ny fepetra vaovao amin'ny famindrana ny angona manokana avy any ivelany.
Ny fikambanana dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny filaminam-baovao-fa ny GDPR kosa dia manangana ny bar. Ilaina izany fa ny fikambanana dia mandray fepetra ara-teknika sy fandaminana arovana mba hiarovana ny angona manokana amin'ny fahapotehana na ny fahazoana fidirana na ny fampahalalana tsy nahazoana alalana. Miaro ny fotodrafitrasa & mpampiasa izahay.
GDP mifehy ny rafitra
Fiarovana amin'ny latabatra
CompanyHub dia miorina amin'ny filaminana mba hiarovana ny angona sy ny fampiharana. Azonao atao ihany koa ny mampihatra ny rafitra fiarovanao manokana mba handinihana ny rafitra sy ny filan'ny fikambanana. Ny fiarovana ny angon-drakitrao dia andraikitra iombonana eo aminao sy CompanyHub. Ny safidy momba ny fiarovana CompanyHub dia manome fahafahana anao hanome hery ny mpampiasa anao hanao ny asany amim-pilaminana sy amim-pahombiazana. Ny rafitra fiarovana maro dia toy izao manaraka izao:
CompanyHub mampiasa Amazonia EC2, RDS, S3 izay efa nambara GDPR Mifanaraka amin'ny Amazon miaraka amin'ny Code of Conduct CISPE.
Ny CompanyHub dia mampiasa ny SSL amin'ny alàlan'ny fitaterana angona avy amin'ny mpampiasa mankany amin'ny tahiry azo antoka. Mampiasa algorithm SHA256 amin'ny alàlan'ny fanoratana ny famaritana.
Ny mpanjifa tsirairay dia mahazo tahiry miavaka ao amin'ny CompanyHub. Noho izany, tsy misy ny fidirana an-tsehatra na ny mety hitrangan'ny tsy fampiasana ny angon-drakitra ny tahan'ny mpampiasa hafa
Amin'ny fampiasana takelam-pahaizana latabatra, ny mpampiasa dia mety ho voafetra amin'ny fahitana, mamorona, fanavaozana na famafana latabatra. Ny fahazoan-dàlana ho an'ny latabatra dia ahafahanao manafina menoketsa misy tabilao amin'ny mpampiasa manokana ka tsy fantany akory na oviana na oviana io tabilao io.
Amin'ny toe-javatra sasany, azonao atao raha tianao ny miditra amin'ny latabatra, fa mametra ny fidirana amin'ny sehatra tsirairay eo amin'io latabatra io. Ny fiarovana amin'ny sehatr'asa-na ny fahazoan-dàlana an-tsaha - ny fanaraha-maso raha afaka mahita, manitsy ny sandan'ny sehatra iray eo amin'ny latabatra ny mpampiasa iray. Izy ireo dia mamela anao hiaro ireo sehatra saro-pady nefa tsy maintsy manafina ny latabatra manontolo amin'ny mpampiasa.
Miaraka amin'ny latabatra sy ny saha, raha te-hifehy ny firaketana ianao, ny safidy Record-level dia ahafahanao manome ny mpisera aty amin'ny lisitry ny latabatra sasany, fa tsy ny hafa. Ny rakitsoratra rehetra dia tompon'ny mpampiasa iray. Ny tompona dia manana fahafahana miditra amin'ilay rakitsoratra. Ao amin'ny ambaratongam-peo, ireo mpiserasera any amin'ny ambaratongam-pirahalahiana dia manana fidiram-bola mitovy amin'ny mpampiasa azy eo ambany sehatr'izy ireo. Misy fomba roa ahafahanao manamarina ny fiarovana an-tsoratra
Firafitry ny fifanakalozan-kevitra momba ny fikambanana Ny dingana voalohany amin'ny fiarovana ny laharan'antoko dia ny famaritana ny fananganana fizarana famolavolana. Matetika, ny rakitra rehetra dia hita amin'ireo mpampiasa rehetra ao amin'ny fikambanana iray. Azontsika ampiasaina ny fifanakalozan-kevitry ny fikambanana mba hanakatona ny data amin'ny tompony sy ny mpitantana. Aorian'izany dia afaka manokatra ny fidirana amin'ny rakitra ho an'ireo mpampiasa hafa mampiasa sehatra fiarovam-piarovana hafa ianao.
Territorial Hierarchy: Rehefa voamarikao fa misy fifanakalozan-kevitry ny fikambanana, dia afaka mampiasa sehatr'asa iray ianao mba hizarana fidirana amin'ny rakitra. Manam-pahefana an-tanety manome alalana ny mpampiasa mahazo miditra amin'ny rakitra mifototra amin'ny fepetra toy ny code postal, indostria, na sehatra mahazatra izay mahakasika ny orinasa. Ohatra, azonao atao ny manangana sehatra an-tanan-draharaham-paritra izay ahafahan'ny mpampiasa manana anjara mavitrika amin'ny "Amerika Avaratra" mahazo ny angona isan-karazany noho ny mpampiasa ny anjara asany "Canada" sy "Etazonia".
Ny tatitra tsirairay dia ampiana amin'ny ordinatera. Ireo mpampiasa dia mety ho voafetra amin'ny fijerena / hanitsiana ny tatitra sasany mampiasa ny fizarana vaovao. Azon'izy ireo atao ny tsy mahazo na tsy navela hijery / hanova ny tatitra.
Azonao atao ny mifidy sehatra sasantsasany ao amin'ny takelaka iray mba handinihana sy hanaraha-maso ny fanovana eo amin'ireo sehatra ireo. Ny fanovàna ny iray amin'ireto sehatra ireto dia manampy asa tsy azo ovaina amin'ny asa ataon'ity latabatra ity.
Ny zo tokony hohadinoina
Fandrarana fanodinana data
Ny orinasa CompanyHub dia miezaka hanampy anao hanaraka ny lalàna momba ny fiarovana sy ny tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny hetsika samihafa toy ny mailaka opt-outs sns. Miangavy ny fandeferana mialoha ny fisoratana anarana izahay. Manangona ny fanekena, ny fotoana fankatoavana, ny fifanajana amin'ny adidy ara-dalàna. Mba hahamora kokoa ny mpanjifany hanangona ny faneken'ny mpampiasa azy, ny CompanyHub dia manome safidy hanangana latabatra nentim-paharazana mba hitahirizana ny faneken'ny mpampiasa. Ireo rakitra fanekena dia azo ifandraisany amin'ny rakitsoratra ao amin'ny takelaka tianao.
Raha te hanaraka ny lalàna fiarovana sy ny fitsipika momba ny fiainana manokana, indraindray ny mpanjifa dia mila mamafa ny angona manokana.
CompanyHub dia manampy ireo fitaovana marobe mba hamafa ny angon-drakitrao. Azonao atao ny misafidy ny mamafa mora ary mitazona ny angon-drakitrao araka ny politikan'ny fiainanao manokana na afaka mamafa ny angona ianao. Azonao atao ihany koa ny misafidy hanao asa iray isaky ny mamafa rakitsoratra. Raha maniry ny hamafa ny kaontiny manontolo ny mpanjifa, dia misy safidy iray natao mba hahafahan'ny mpampiasa miditra ao amin'ny famerenana famerenana diso ary hamafa ny kaontiny avy amin'ny CompanyHub araka ny politikantsika.
Rehefa mitaky anao ny toe-javatra, dia misoroka ny fanodinana ny angonin'ny mpanjifanao. Manome tari-dalana hanampiana anao hametra ny endrika fanodinana ny angona. Amin'izany fomba izany, afaka miara-miasa amin'ny lalàna izay manan-danja amin'ny orinasa ianao. Afaka mandefa ny angona avy amin'ny CompanyHub ianao fa tsy te-hanina.
Misy safidy samihafa ho an'ny fampitaovana ny fampitaovana. Azonao ampiasaina amin'ny API, Wizard Import amin'ny fandefasana ireo angona avy amin'ny rakitra CSV ho an'ny CompanyHub. Azonao atao ny mamela ny mpanjifanao hanondrana ny angon-drakiny araka ny fitsipika isan-karazany. Azo alaina avy amin'ny fomba isan-karazany ny data, toy ny fanondranana UI, tatitra, REST API. Ny format manan-danja dia ahitana JSON sy CSV.
Ankoatra izany, ny politika fiarovana fiainan'olona manome fampahalalana bebe kokoa momba ny fiainantsika manokana, ny angona angonintsika, ary ny fomba ampiasantsika azy. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay amin'ny support@companyhub.com.